How To Make Abangane Ngo Strange okusha Izingxenye Of The World | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > How To Make Abangane Ngo Strange okusha Izingxenye Of The World
How To Make Abangane Ngo Strange okusha Izingxenye Of The World
ngu Liam Cartwright
(Kugcine ukubuyekezwa On: 24/03/2020)
Ukuya izingxenye ezihlukahlukene zomhlaba wedwa kungaba okuhlangenwe nakho khanyisa futhi kujabulise. Kungakhathaliseki ukuthi into ongayenza sonke isikhathi, noma kanye uhambo esaphila ukuze sandise HORIZONS zakho, travel ungashintsha ikusasa lakho.
Abantu abaningi kulezi zinsuku ukhetha ukuhamba wedwa, uthola amandla amasha nenkululeko enjalo okuhlangenwe nakho izipesheli. LifeHack uyachaza ukuthi kungani kube indlela onjalo owawuthandwa ngawo ukubona izwe eminyakeni yamuva.
Uma wenza kanjalo travel wedwa, ingxenye adventure is ukuhlangana nabantu abasha, Ngokuvamile labo ezahlukene kakhulu kuwe, kodwa bonke bazoba ngethemba ekucebiseni jikelele adventure kwezohambo.
Ngakho, ake sihlolisise ezinye izindlela ezahlukene ungakwazi ukuhlangabezana abantu izinxenye ezintsha zezwe.
Nakuba amaqembu kukhona i choice esobala, The Guardian kusikisela babelana ziwa nasemseni millennials. umculo Phila iyaduma kakhulu, ne isikhathi phakathi amasethi ukuzwa ngokwakho ucabanga futhi wenze ujwayelene nabantu ezintsha.
Ziningi kakhulu hip Amabha enkulu kulo lonke elaseYurophu lezo looking ukuze travel emhlabeni ukuthandwa of Paris, Luxembourg, futhi London, zonke ephelele ukuhlangabezana umuntu omusha esilandelayo adventure yakho.
E-Antwerp liye Luxembourg Izitimela
Brussels ukuze Luxembourg Izitimela
Metz ukuze Luxembourg Izitimela
Paris Luxembourg Izitimela
Ukudlala poker kuyinto indlela enhle kakhulu ukuhlangana nabantu abasha, njengoba uku zizungeze itafula ngifuna ukuqonda isitha sakho. Wena ukufunda kwabo, ihlaya nabo Yakha izibopho okuyinto ungathatha ekuthunjelweni uhambo lwakho.
Omunye izinzuzo ukudlala poker wukuthi kungcono lula ukufunda, okusho ngisho imfundamakhwela ungakwazi pick it up ngokushesha ukuze ukusetshenziswa njengendlela ukuhlangana nabantu abasha. Izikole khadi Partypoker ukunikeza izifundo ku Texas Holdem kulabo nge kancane akukho nakho umdlalo.
Okudingayo manje ukuthola yekhasino, zazo zikhona amaningi emhlabeni wonke enikeza ithuba basebenzisane nabantu ongabazi, hhayi nje ukuba izihambi kodwa bendawo kanye.
'Ingxenye kumnandi siya khona'; kukangaki ukuthi wake wakuzwa ukuthi uhambo olude? Nakuba ohamba yedwa, kungase nje lesifanele.
Kukhona ezinye kulolu hambo emangalisayo isitimela ukuthi ingase ikhishwe kulo lonke elaseYurophu, edlula kwezinye zezindawo ezinhle kakhulu nezwekazi kufanele sipho. Nakuba wena esitimeleni, nezinye abanazo nabantu kungenzeka kube khona kakhulu.
Kuyindlela enhle kakhulu ukuhlangabezana zonke izinhlobo zabantu zokuphila, bendawo beya futhi bebuya emsebenzini, nezinye izihambi ku adventure yabo futhi mhlawumbe ngisho umuntu you phetho ukwabelana ezinye ngolwazi lakho.
Ezemidlalo kunjengesipho okuningi izivakashi kulezi zinsuku njengoba uyinto for bendawo ukujabulela. Noma ngabe uhambo yezemidlalo noma ithuba ukuthatha ngomcimbi bukhoma, kungcono indlela enhle imbuing ngokwakho isiko endaweni.
Mhlawumbe ukuthatha emdlalweni ikhilikithi e-Asia, noma ukubukeka ukulandela ezweni lakho emhlabeni Euro 2020 okuyinto Sky Sports uchaza kungenxa kwenzeke emadolobheni ahlukahlukene emhlabeni Europe. Bangu izinkulungwane izenzakalo emhlabeni wonke nsuku zonke ukuthi ithuba lokuhlangana nabanye abantu abasha endleleni yakho.
Ingabe ukulungisa ukuze travel futhi Yenza abangane ezingxenyeni eziyinqaba ezintsha zezwe? Londoloza Isitimela ukukusiza Incwadi Isitimela lula futhi ngemali ephansi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “10 Iningi Beautiful Amadolobha Medieval EYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/how-to-make-friends-in-strange-new-parts-of-the-world/ – (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha izilimi / nl ku / fr noma / de nokuningi.
#abangane #worldtravel strangeplaces traveltips
Liam Cartwright kuyinto umbhali ezizimele futhi Globetrotter oye wanikezela ukuphila kwakhe ngokuvakashela izindawo ezintsha kanye ukuhlangana nabantu abasha. Njenge (ikakhulukazi) solo isihambi uyasiqonda nobunzima wokuba ezweni elisha futhi engazi ubani. Unethemba lokuthi izihloko wakhe uzokwenza amathiphu esihle sendlela esingafeza ngayo ukusinda njengoba wamazwe oyedwa kanye ahlangane esikanye izihambi. Lapho akakhulumi ukuhlola amazwe amasha lapho kungatholakala ekhaya nge incwadi travel ukucabanga ngeluhambo lwakhe olandelayo. - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte